Arjiga Macluumaadka DrugsInc Encyclopedia • Drugs Inc.eu
Isticmaalka Mukhaadaraadka Encyclopedia
Home » Isticmaalka Mukhaadaraadka Encyclopedia
Ayahuasca waa cabbitaanka hallucinogenic ee Koonfurta Ameerika. Waxaa laga sameeyay jirridaha iyo caleemaha geedka pendulum oo laga sameeyay Amazon.
Cannabichromene (CBC), oo sidoo kale loo yaqaan cannabichrome, cannanbichromene, pentylcannabichromene ama cannabinochromene, waa mid ka mid ah boqolaal ka mid ah xashiishadda cannabinoids ee xashiishadda cannabis, sidaas darteedna waa phytocannabinoid. Waxay muujineysaa isku mid ahaanshaha qaab dhismeedka cannabinoids kale ee dabiiciga ah, oo ay ku jiraan tetrahydrocannabinol (THC), tetrahydrocannabivarin (THCV), cannabidiol (CBD) ...
Cannabidiol (CBD) waa mid ka mid ah dabiiciga ah ee cannabinoids ee laga helo geedaha cannabis. Waa xuub terpenophenolic ah oo leh xamiino kaarboonka 21 ka dib markii decarboxylation ka soo horjoogaha cannabidiol acid, inkastoo ay sidoo kale la soo saari karaa synthetically.
A cannabinoid waa nooc ka mid ah xeryahooda kiimikada kaladuwan ee u dhaqma dhakhaatiirta cannabinoid, oo sidoo kale loo yaqaan nidaamka endocannabinoid ee unugyada wax ka beddelaya sii deynta neurotransmitters maskaxda. Cudurka loo yaqaan 'Ligands for protein' ee borotiinada waxaa ku jira endocannabinoids oo si dabiici ah ...
Cannabidiol (CBD) waa phytocannabinoid oo laga helay 1940. Waa mid ka mid ah 113 loo yaqaan cannabinoids ee dhirta cannabis iyo xisaabaadka ugu badan ee 40% ee ka soo saarka dhirta. Si ka duwan sida loo yaqaan 'molecule', tetrahydrocannabinol (THC), waa ...
Cannabidiol acid (CBDA) waxay ku dhacdaa qanjidhada resinan (trichomes) ee geedka cannabis. Waa horudhaca cannabidiol (CBD). CBDA waxaa loo arkaa mid aan firfircoonayn illaa inta laga shaqeynayo ka dibna uu noqdo mid firfircoon oo CBD ah. Si loo dardar geliyo CBDA, waa in la daahaa ...
Cannabinoid yar oo la yiraahdo cannabigerol (CBG), taas oo aan ku jirin tiro balaadhan oo ah noocyo badan. Cannabigerol (CBG) waa unugyada asaasiga ah ee dhammaan cannabinoids ee warshadda cannabis. Waxay u shaqeysaa sidii horey loogu talagalay tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) iyo ...
Crystal meth waa gaabin loogu talagalay methamphetamine crystal. Waa hal nooc kaliya oo ah methamphetamine daroogada. Methamphetamine waa daawo kookheer ah oo ay dadku ku qaataan iyada oo ku dhufanaya (nuugista sanka), sigaar cabista ama u yeelashada ...
Cuntada la cuni karo waxaa loo yaqaanaa badeecad cunto oo ay ku jiraan cannabinoids, ugu horreyn tetrahydrocannabinol (THC). Waxay noqon kartaa xashiishad cabitaan ah, laakiin sidoo kale cunnada fudud sida cookie, lollipop ama jooniska cbd. Wax kasta oo la cuni karo oo ku jira cannabis ayaa loo arkaa mid la cuni karo ...
Tabernanthe iboga waa geed u dhashay Galbeedka Afrika. Geedkani wuxuu u dhashay Gabon iyo Kongo wuxuuna ku koray Galbeedka Afrika oo dhan. Iboga waxaa loo isticmaali karaa si wax ku ool ah looga soo horjeedo qabatinka opioids.
"Neefsasho" (ama neefsasho) waa qalab la qaadan karo oo lagu maamulayo daawo loo isticmaalo in la neefsado, loo isticmaalo, iyo waxyaabo kale, oo lagu naaquso neefta iyo cufnaanta kale ee sanbabada ama sanka.
Qiyaasaha badan ee ketamine-ka waxay sababi karaan in qofku si buuxda uga takhaluso xaqiiqada oo uu ku sii dhammaado xaalad kala-goys ah oo loo yaqaan 'K-god'.